ulawula njani i-pc yakho ukude usebenzisa i-smartphone okanye ithebhulethi yakho (i-android, ios)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uyilawula njani iPC yakho ukude usebenzisa i-smartphone okanye ithebhulethi yakho (i-Android, i-iOS)
Ngaba wakha, nangasiphi na isizathu, kufuneka ufikelele kwiPC yakho ngelixa usendleleni? Siyayazi loo mvakalelo, kwaye kunokwenzeka kakhulu-ukuba ikhompyuter yakho ivuliwe-ukuyilawula ukude nge-smartphone yakho. Zininzi iindlela zokwenza oku, kodwa sizakuhamba ngenye yeendlela ezilula nezona zithembekileyo ezingafunisi nasiphi na isoftware enzima ngokungeyomfuneko kwaye zisebenza kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS. Yonke into oyifunayo, ngaphandle kwesixhobo sakho esiphathwayo, yiPC enesikhangeli seChannel esifakwe kuyo kunye nemizuzu eli-10.
Ke, faka uGoogle Chrome ukuba awunawo & apos; kwaye ubhekise phambili kwiVenkile yeWebhu ye-Chrome ukukhuphela usetyenziso lweDesktop ekude yeChannel. Nje ukuba yongezwe kwi-Chrome, vula kwaye ungene ngeakhawunti yakho kaGoogle, unike iimvume ezifunekayo.
Kuya kufuneka ukhuphele iplagi yedesktop ekude yeChannel kwiVenkile yeWebhu yeChannel
Emva koko, kuya kufuneka usebenze unxibelelwano olukude kwiPC yakho. Oku kunokwenziwa ngokunqakraza ku “Qalisa” kwicandelo “leeKhompyuter Zam” kwiscreen sokuseta kunye nokufaka umphathi weDesktop ekude yeChannel.
Okwangoku, kuya kufuneka ucofe Qalisa phantsi kweeKhompyuter zam Ngoku, cofa ku Nika amandla uqhagamshelo olukude ukufakela umphathi we desktop ekude
Okokugqibela, emva kokuba unxibelelwano olukude lunikwe amandla, uya kuyalelwa ukuba usete i-PIN yamanani amathandathu ubuncinci. Qiniseka ukuba uyayikhumbula, njengoko kuya kufuneka uyifake kwifowuni yakho ukuze ugunyazise uqhagamshelo. Le yimfuneko yexesha elinye, nangona unokukhetha ukucelwa ukuba ufake ikhowudi yePIN ngalo lonke ixesha.
Nje ukuba wenze loo nto, bamba ifowuni okanye ithebhulethi yakho, intloko uye kwiVenkile yokudlala okanye kwiVenkile yeApple yeApple kwaye ukhuphele usetyenziso lweDesktop ekude yeChannel. Inkqubo iyafana kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS. Vula uvule iapp, ungene ngeakhawunti efanayo kaGoogle oyisebenzisayo kwiPC yakho, faka ikhowudi efanayo yePIN, kwaye kuya kufuneka ubone uluhlu lwamagama azo zonke iikhompyuter zakho. Idesktop ekude yeChannel ingasetyenziselwa ukulawula ii-PC ezininzi ngesixhobo esinye esiphathwayo kwaye konke okufuneka ukwenze kukuphinda inkqubo nganye nganye.
Ngema Uluhlu lweePC zakho
Siyavuyisana nawe, i-touchschreen yesixhobo sakho esiphathwayo ngoku iyiphedi yokubamba kunye 'nefestile' kwiPC yakho. Ungacofa ukusondeza, sebenzisa ikhibhodi ebonakalayo, uvule kwaye uvale iinkqubo kwikhompyuter yakho, ucime kude, ucofe isikrini ngeminwe emibini ucofe ekunene kwaye uthumele nomyalelo weCtrl + Alt + Del ngokucofa amachaphaza amathathu kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
Khuphela iChannel yeDesktop ekude:
Ivenkile yeGoogle Play Ivenkile yeApple Ivenkile yeWebhu yeChannel
Inqaku lomthala 3 vs. LG g3
isibuko esimnyama vs ezinzulwini zobusuku emnyama
Eyona mihlanu yeekhamera eziMnyama ngoLwesihlanu kunye neCyber ​​ngoMvulo ziyafumaneka ngoku
Iqinisekisiwe i-32GB kaGoogle Pixel XL enexabiso eliphantsi njenge- $ 230 ngeAmazon
Eyona matyala ebhetri e-iPhone SE ngo-2021